Ogqoke Kakhulu Emiklomelweni Ye-GQ 'Men Of The Year': Vota Manje! - Isitayela
Ogqoke Kakhulu Emiklomelweni Ye-GQ 'Men Of The Year': Vota Manje!
Imiklomelo yeBritish GQ's 'Men of the Year' ingazwakala ifana nayo yonke i-dapper dude, kepha bekungabesifazane be-uber-glam abantshontshe ukukhanya izolo ebusuku. Votela okugqoke kahle, ngemuva kokugxuma.
ELONDON, ENGLAND - SEPTEMBA 08: UFreida Pinto uhambela izindondo zeChampagne Reception for GQ Men of the Year eRoyal Opera House ngoSepthemba 8, 2009 eLondon, e-England. (Isithombe nguJon Furniss / WireImage)
Asibonanga okuningi kukaFreida Pinto kukhaphethi obomvu selokhu kuphele isizini yemiklomelo, futhi sengimkhumbule impela! Ingubo yakhe ivela eqoqweni likaChristopher Kane lokuwa kuka-2009, futhi ngicabanga ukuthi uyigqoke kahle - inemininingwane eyanele yokuthi ayidingi izesekeli eziphazamisayo, futhi izicathulo zishaya ibhalansi ephelele phakathi kwabesifazane nabanolaka.
ELONDON, ENGLAND - SEPTEMBA 08: U-Eva Mendes ufika kuma-GQ Men Of The Year Awards ka-2009 eRoyal Opera House ngoSepthemba 8, 2009 eLondon, eNgilandi. (Isithombe sikaMike Marsland / WireImage)
U-Eva Mendes, ngakolunye uhlangothi, ubelokhu egcwele yonke indawo muva nje. Ngimthandile ubukeka kwiVenice Film Festival, futhi uqede ukuvakasha kwakhe e-Europe ngokushaya ngamandla kule ngubo yasebergini enentamo enciphayo. Umbala muhle kuye futhi ngiyayithanda indlela isiketi esivele sivele sanele.
ELONDON, ENGLAND - SEPTEMBA 08: UKelly Osbourne ufika kuma-GQ Men Of The Year Awards ka-2009 eRoyal Opera House ngoSepthemba 8, 2009 eLondon, eNgilandi. (Isithombe sikaMike Marsland / WireImage)
Nina niyazi umthetho wami mayelana nokukhombisa isikhumba - kwenze kuphela endaweni eyodwa yomzimba wakho ngesikhathi esisodwa - futhi ngicabanga ukuthi intambo ephezulu kaKelly Osbourne iphikisana ne-hemline emfushane kakhulu kahle. Kepha angikwazi ukuzibamba ngifisa sengathi ngabe ubenentwana nje ye-liiiiitle (ama-intshi amabili angenza!) Indwangu ethe xaxa ezansi kwengubo yakhe.
ELONDON, ENGLAND - SEPTEMBA 08: UDaisy Lowe ufika kuma-GQ Men Of The Year Awards ka-2009 eRoyal Opera House ngoSepthemba 8, 2009 eLondon, eNgilandi. (Isithombe nguDave M. Benett / Getty Images)
hugh jackman deborra lee ubumnandi
Imodeli yaseBrithani uDaisy Lowe ubheke ukubukeka kwesikhathi esizayo kule ngubo yesiliva - kulula kakhulu ukubukeka njengamazambane abhakiwe lapho ugqoke lokhu okusansimbi, futhi kufanele nginikeze izinsiza zikaDaisy zokuzikhipha ngendlela enhle kakhulu lokho akukukhumbuzi nakancane ukudla kwakusihlwa eTGI NgoLwesihlanu.
ELONDON, ENGLAND - SEPTEMBA 08: U-Liz Hurley ufika kuma-GQ Men Of The Year Awards ka-2009 eRoyal Opera House ngoSepthemba 8, 2009 eLondon, eNgilandi. (Isithombe nguDave M. Benett / Getty Images)
Futhi-ke sino-Elizabeth Hurley ongagugi egqoke ingubo engenantambo ngebhande le-jeweled phakathi nendawo. Umbala muhle kepha ngicikekile yizicathulo - bengizothanda ukubona ipulatifomu yesiliva ye-chic noma okuthile okungahambisani ngokuphelele, okufana nephuzi elikhanyayo eliphuzi noma elishisayo. Namanje: Uyakholelwa ukuthi lo wesifazane uneminyaka engama-44 !?
Isikhathi sokukhuluma ngemfashini ekhaphethi obomvu, onodoli: Ucabanga ukuthi iyiphi inkanyezi eyayigqoke kahle? Ingubo kabani okwakunguYe hhayi encwadini yakho? Futhi yikuphi kulokhu kubukeka ongathanda ukukugqoka kakhulu? Xoxa!
Ubani owayegqoke kahle emiklomelweni ye-GQ 'Men of the Year'? ( izinhlolovo )
Faka i-Glamour ekhasini lakho eliyisiqalo le-iGoogle
Landela Izigqila Zemfashini ku-Twitter!
Izithombe: UMike Marsland / WireImage; UDave M. Bennet / Getty Izithombe; UJohn Furniss / WireImage
kusho ukuthini uma uphupha ngokufa
zithandana njenge-asap rocky futhi rihanna
isifihla-buso sokuphefumula sezibuko
I-toner enhle kakhulu yesikhumba esivuthiwe 2020